Proverb 437 Andevolahin- telopolo mitaingina ariary zato . [Veyrières 1913 #501]
Proverb 670 Ariary zato iombonana , ka ny kisoa iray no iadiana . [Veyrières 1913 #3191]
Ny ariary zato iombonany fa ny kisoa iray iadiany . [Rinara 1974 #2906]
Ny ariary zato iombonany , ka ny kisoa iray iadiany . [Houlder 1895]
Proverb 976 Aza manao ariary zato am--pandriana . [Houlder 1895 #691]
Manao ariary zato am--pandriana . [Rajemisa 1985]
Manao ariary zato am--pandriana fa voamena nony mifoha . [Rinara 1974 #1985]
Manao ari-zato am--pandriana . [Cousins 1871 #1528, Nicol 1935 #47]
Proverb 1200 Aza manao variraiventy maniho ariary . [Houlder 1895]
Aza manao voamena manohana ny ariary . [Rinara 1974 #635]
Manao voamena maniho ariary . [Veyrières 1913 #2301]
Voamena maniho ariary . [Rajemisa 1985]
Proverb 1609 Basi- na ariary fito : tsy takatry ny ory , tsy tian' ny mpanana . [Rajemisa 1985]
Basin' ariary fito : sady tsy tian' ny mpanana no tsy takatry ny ory . [Rinara 1974 #850]
Basin' ariary fito : tsy tian' ny mpanana ary tsy takatry ny mahahelo . [Rajemisa 1985]
Basin’ ariary fito : tsy tian’ ny mpanana , tsy takatry ny malahelo . [Cousins 1871]
Salasala ohatra ny basin' ariary fito : tsy takatry ny malahelo , tsy tian' ny mpanana . [Houlder 1895]
Proverb 1913 Fahan-kisoan' i Vonizongo , ka ny lasan- -ko ariary no tohanana . [Rinara 1974 #1050]
Fahan-kisoany Vonizongo : ny ho lasan- -ko ariary no tohanana . [Cousins 1871 #880]
Hoatry ny fahan-kisoan' Ivonizongo : ny lasan- -ko ariary no tohanana . [Veyrières 1913 #4383]
Proverb 1966 Fanambadian' Imanontalahy : ariary no vodiondry , ka voamena no fahatelon-tanana . [Cousins 1871]
Fanambadian' Imanontalay : ariary no vodiondry , ka voamena no fahatelon-tanana . [Veyrières 1913 #1369, Rinara 1974]
Proverb 2302 Haren-kiadiam-boamena ; enti-miady , ariary ; fitsaram- bolafolo . [Veyrières 1913 #3340]
Proverb 4399 Mitoetra amin' ny lazako teo aloha, hoatry ny basin' ariary fito aho. [Veyrières 1913 #1661]
Proverb 7969 Vakin-doso manolotra ny ariary . [Veyrières 1913 #266]
Proverb 8054 Varifitoventy zato no tonga ariary . [Rajemisa 1985]
Malagasy interpretation Mitovy hevitra: erikerika mahatondra-drano . [Rajemisa 1985]